Odokotela Abaxotshwe Umsebenzi Baqoqa Umhlangano Wokucubungula Isinqumo Sikahulumende
Odokotela abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende esokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo.
Odokotela bezinga eliphansi, ama juniour doctors, abaxotshwe umsebenzi bathi bazohlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende esokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo.
Odokotela abedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo besetheswa umlandu wokukhalala umsebenzi ngaphandle kwemvumo.
Kodwa uhulumende wazise izolo ukuthi usebabuyisele emsebenzini njalo uthe kumele babe sebeqalisile ukusebenza phakathi kwanamuhla lakusasa.
Lanxa inhlanganiso ebamelayo eyeZimbabwe Hospital Doctors Associaton isithi ayikakhulumisani ngesinqumo sikahulumende, abanye odokotela bathi nxa iholo labo lingakhwezwanga lafika kuzinga abalifunayo kabasoze babuyele.
Odokotela bezinga eliphezulu, ama seniour doctors, labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabalamali yokugada izimota besiya ezibhedlela. Sixoxe lomunye wabo uDokotela Ngqabutho Dube yena othi bathwele amagabha avuzayo.
Ingxoxo loDokotela Ngqabutho Dube